एउटा सोच: कहाँ थियो त HIV ?? | nareshtimalsina
एउटा सोच: कहाँ थियो त HIV ??
June 8, 2015 Dr. Yagya Pd. Timalsina	Leaveacomment
अ.. हो!!! त्यहि एक सर्को ….. सायद एक वर्ष अघि बाबाले झापड हान्दा तानेको थियो….त्यो एक सर्को ! त्यो पनि तल्लो घरको SLC फेल हर्केसङ्ग ! आज हर्के र उ संगै छन् … संगै… मृत्युसैयामा!!! डाक्टर साबहरु उसलाई एड्स लग्यो भन्दै थिए!
एक वर्ष अघिको त्यो चुरोट…..मात्र एक सर्को काफी भयो उसलाई! आनन्द आको थ्यो रे उसलाई तेतिबेला!! त्यसपछि उसले गाजा, चरेस, ब्राउन सुगर, अनि के के अरु पनि तान्यो रे! ३ महिनाअघि असनको गल्लिमा देख्या थिए उनीहरुलाई! वरिपरि सुइका ठुटा थिए! एक हातबाट रगत बग्दै थियो भने अर्को हात सुन्निएको थियो उसको! बिहोस थिए दुवै जना …. त्यो पनि जवानीको २२औ वर्ष मा!!
सायद त्यो सुइमा HIV थियो होला….
कि बाबाको त्यो झापडमा HIV थियो कतै??
कतै उसको मानसिकता र अज्ञानतामा त HIV थिएन???? कतै हर्केले दिएको पहिलो सर्को चुरोट मा त HIV थिएन?? असन को गल्लीमा लाचार छोडेर हिडेको मैले, कि मेरो ब्यबहारमा HIV थियो?? एक्लै हिडेकी नानीलाई समेत जिस्काउन नछोड्ने पोसाकमै भाएको प्रहरीको लापरबाहीमा त HIV थिएन नि है? कि हाम्रो लाचार एवम निस्फिक्री समाजमा HIV थियो?
खोइ, कहाँ थियो त HIV ???
Previous Postनमार मलाई घरि घरिNext PostFIRST LOVE